Dashain Special - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
To: दसै, प्रतीक र जीवन
खगेन्द्र सँग्रौला - बालसुलभ उमेरको नेटो काटेपछि दसैँको टीका मलाई पितापुर्खादेखि मानिल्याएको औपचारिकताजस्तो मात्र लाग्थ्यो । तर छोरा सात समुद्रपारि गएको वर्ष टीकाको भावनात्मक मुल्यको मलाई गहिरो गरी अनुभूति भयो ।
रुझेको मन, रुझेको दसैँ...
विनिता दाहाल - मौसम जस्तै यसपालि दसैँमा हाम्रो मन पनि रुझेको छ । पोहोरजस्तो सपरिवार हामी मामाघर गएनौं । ममिले टीकाको दिन सजाउने गरेको पूजाकोठा सफा गरेँ । कुनाकाप्चा धेरै कसिंगर जमेको रहेछ । सफा गरेँ । तपाईँको तस्बीर भगवानहरुकै लहरमा राखेँ । मैले पहिल्यै राख्न खोजेको थिएँ । दाईले मान्नुभएन । विहान उठ्ने बित्तिकै मन रुझ्छ भनेर सायद । तर मलाई लाग्यो तपाईँ अब हाम्रो मनमा सजिनुपर्छ । भगवानहरुको जस्तै पुजिएर ।
विरक्तलाग्दो अमेरिकी जीवन
रेखाकुसुम रेग्मी - “एम अनम्यारिड, आई एभ टु किड्स।” मसँगै काम गर्ने डेजरे रोड्रिजेजको यो कुराले मेरो मनमा अनेक प्रश्न जन्माए। उस्को काम गर्ने पहिलो दिन मैले नै तालिम दिनु परेकोले अलिकति अनौपचारिक कुरा भएको थियो। थाहा पाएँ, २३ वर्षकी अविवाहित डेजरेसँग तीन र एक वर्षका गरी दुईटा छोरी साथमा छन्।
राजीव घिमिरे - म धरातलमा छु, एक्लो र आफै सग । म हांसि दिन्छु । किनरु हुन त रोएको पनि छु । दुबै छन् मसँग । म दुबै संग छु । लोग्ने मान्छेको बिश्वास सांच्चै पातलो हुन्छ । छिसिक्क केहि हुनु हुदैन । केरकार शुरु । म हजार कोशिस गरौ, अपवाद हुन कहिले सकिन । मेरो कमजोरि पनि हुन सक्छ वा प्रकृति । मैले ध्यान नदिएको पनि होईन। बिचारलाई रोकेको पनि हो । अझ भनौ बिचार रोक्ने प्रयास पनि गरेको हो । तर पनि कहिले कांहि कमजोर भईन्छ ।
प्रकाश लामा, काठमाडौ‌, असोज २६ - चारै तिर दशैँको माहोल छ । हिजो फुलपाती भित्र्याएर आज अष्टमी मनाएर । हिजोसम्मको व्यस्त बजार आज लगभग पुरै बन्द छ । आफन्त घर परिवारसँग मिठो खाएर पूजाआजा गरेर मनाइन्छ दशैँ ।
दशैँकै बेला जात्रा हुने खोकनाको चहलपहल भने केही भिन्दै छ । सारा खोकनाबासी सिद्धिकाली जात्रा अर्थात् खोकना जात्रामा झुमिरहेका छन्।
प्रेमचन्दको कथा: मेरो दाइ
मेरो दाइ म भन्दा पाँच बर्ष जेठो भए पनि उ म भन्दा तीन कक्षा मात्र अगाडि छ। मेरो दाइ पनि मेरै उमेरमा स्कुल जान थालेको हो। तर उसलाई पढाई लेखाइमा कुनै हतार थिएन। उ एउटा मजबुत जग बसाउन चाहन्थ्यो ताकी उ यसमा भब्य दरबार बनाउन सकोस्। उ एक बर्षको काम दुई बर्ष लगाएर गर्थ्यो। कहिलेकाही त तीन बर्ष पनि लगाउथ्यो।
सम्झना: रेलमा छुटेको दसैं
दीपक सापकोटा - अजिंगरझैं घिस्रिने लामो रेल ‘कुहुँहुँ...’ आवाज निकाल्दै अघि बढथ्यो । डरलाग्दो इन्जिन, आँखामात्रै देखिने गरि टाउको छोपेका केहि मान्छे र एउटै लयमा पछयाइरहेका लस्करै डब्बाहरू । स्टेशनबाट रेल छुटनुअघिको दृश्य बडो एकतमासको हुन्थ्यो । रेलको सिटमा बसेकी केटीका आँखा बगिरहेका हुन्थे । रेल हिँडन सुरु गर्थ्यो र एउटा केटो रेलका डिब्बा पछयाउँदै दौडन्थ्यो ।
सम्झना: त्यसपछि कहिल्यै गानो गएन
मोहराज शर्मा - आमा ! म आज स्कुल जान्न ।
किन जान्नस् ? आमा म तिर सर्किनु भो ।
मैले कुम ठोक्दै भने, 'जान्न ! जान्न ! ! जान्न ! ! !'
उता दिदी खित्खिताउँदै थिइन् । स्कुल जान अबेर भैसकेको थियो ।
सम्झना: मन, आमा र रोशीखोला
गोपी मैनाली - ‘सञ्चो भएपछि धित मर्ने गरी कुरा गरुँला बाबु अहिले असजिलो भो ।’ पेटको क्यान्सरबाट छटपटाएकी मेरी आमाले असीम पीडाका साथ यो वाक्य बोलेकी थिइन्। बोलीका पछि कति धेरै माया थियो भन्ने कुरा बोल्नै नसक्दा बोलेका यी शव्दबाट थाहा हुन्थ्यो। तर आमालाई थाहा थिएन, ‘धित मर्ने गरी’ कुरा गर्ने दिन आउने छैन। राम, म र युवदाजुले उहाको रोगको सवै कुरा नवताइ टार्ने गरेकाथ्यौँ।
म जन्मँदाको दशैं
मनोज बन्जारा - प्राइमरी स्कूल जाँदा साथीहरु मज्जाले जन्मदिन मनाउँथे। धेरै जसोले चकलेट त कोही घरमा आमाले बनाई दिएका लड्डु कक्षाभरी बाँढ्थे। अनि सबैको "ह्यापी बर्थडे टु यू" पाउँथे। बर्थडे बोइ मिठाई पसलको जेरी जस्तो हुन्थ्यो, बाँकी कक्षाका हामी सबै भने त्यसमा झुम्मने मौरी। मलाई भने साथीहरुले बर्थडे मनाएको देखेर साह्रै इर्ष्या लाग्थ्यो, रिस उठ्थ्यो।
केदार शर्मा - मिता,
मैले त कहिल्यै बिर्सिन सकिँन
तपाईँ र मलाई साथै राढीमाथि बसाएर
मितबा मितामाले निधारै ढाकेर
दुईहातले लगाइदिएको टीका